Text Tonga eo am-bavahady ny posy ka apetraky ny borizano. Iny mivoaka avy ao Ramatoa Ravoahirana, nitsipitsipika toy ny fandiafasika nahazo remby, mivimbina ravin-damba sy haingon'akanjo avy novidina teny amin'ny magazain'Iarivo. " Tsy mbola tonga ihany angaha ny kalesin-dalamby avy any atsimo, hoy ny fanontaniany. Tsy andriko izany hiverenan-dRajao" ! Ndrematoa Rajao vadiny dia lasa hatry ny afak'omaly, fa Ingahy Rakotoasimbola anadahin-dreniny dia mpanankarena ngezalahy ao amin'ny tapany atsimo. Tsy mba niteraka izy ary tsy mba nanangan-jaza koa, nefa ny fahanterana sy ny fahosana mandroso isan'andro. Rajao no hany zana-kavany tandrifin'ny hatsangany; nefa sampona lava ny fanjanahany azy ara-dalàna, satria Rangahy moa zanak'antitra mararirarin'ny fandanian-karena foana; Rajao tokony handova azy kosa, tanora fantezy tsy mitety ny lany sady fanteziam-piainana avo sasaka, satria izy sy Ravoahirana vadiny dia tena mpivady mifanara-tsaina tokoa, fa "tsy mipepo" ! hoy ny fitenin'ny lahy, " izay alehan' ny ory alehan'ny tsy manana " , hoy kosa ny fihenahenan'ny vavy, rehefa mifaninana amin'ny rendrarendrany isan-karazany izy.